Jabra Inogadziridza Yayo Chigadzirwa Range Nematatu Elite Series mahedheseti | Gadget Nhau
Jabra yakazvipira kune tekinoroji uye neruzha ruzha, isu takaongorora akawanda emidziyo yavo pano kuActualidad Gadget uye haina kumbomira kutishamisa kuti vanga vachida kutora mukana wegore rino 2021 kuvhura nhevedzano yezvinhu zvinokwezva kuti varambe vachichengetedza yakakwira yakaringana neasina waya kurira. Jabra inopa iyo Elite 3, Elite 7 Pro uye Elite Inoshanda, ayo mahedhifoni matsva kune vese vateereri.
3 Kuburitswa zuva nemitengo
Jabra inopinda zvigadzirwa zvekupinda-chikamu zvakaenzana neElite 3, chishandiso chinopa 6-millimeter maspika, mu-app chiyero, codec uye Qualcomm aptX HD tekinoroji uye kusvika maawa manomwe ekuzvimiririra ayo achawedzerwa kusvika maawa makumi maviri nemasere nekuda kwebhokisi rekuchaja rinosanganisirwa. Zviripachena isu hatina ruzha rwekudzima ruzha, asi isu tinosimbisa kuti nekuda kweiyo HearThrough basa, vashandisi vanokwanisa kuwana manzwi enharaunda yavo. Rudzi rwemavara runosanganisira navy bhuruu, rakasviba grey, lilac, uye light beige.
Aya mahedhifoni matsva ekumusoro-soro kubva kuJabra anozoita MultiSensor Voice, Jabra tekinoroji kune inoretically kuendesa hunyanzvi mhando kurira. Zviripachena kuti inoperekedzwa neinoshanda ruzha kudzima tekinoroji iyo yakaratidza kambani.
Padanho rekuzvitonga, isu tichafadzwa nemaawa mapfumbamwe ekuramba tichitamba neANC yakagadziriswa iyo inokwira kusvika kumaawa makumi matatu nemashanu kana tikataura nezvebhokisi rekuchaja, iro nenzira, rine IP9 kuramba mvura yakazara. Kuti utore mukana weAptX HD tekinoroji, inoshandisa Bluetooth 5.2 uye zviri pachena kuti vanobheja mukana wekushandisa kwakazvimirira (isina nhare yemuranda), pamwe nehurongwa hwekubatanidza panguva imwe chete kumidziyo yakawanda.
Kune chikamu chayo, ine Android, vanonyanya kubatsira vabatsiri vakaita seGoogle Kumba uye Alexa vanozogadzirisa sisitimu yekubatanidza, neIOS ivo vachashanda zvakanyanya kuburikidza naSiri.
Jabra Elite 7 Inoshanda neiyo yekupayona ShakeGrip TM kupfeka, yakakwana kune vashandisi vane anoshanda mararamiro.
Kuburitswa zuva nemitengo
Iyo Elite 3 ichave ichiwanikwa kubva munaGunyana 1, nepo Elite 7 Pro uye Elite Active ichave ichiwanikwa kubva muna Gumiguru. Zvese zvigadzirwa zvichawanikwa muzvitoro zvakasarudzwa pamutengo unokurudzirwa we:
Elite 7 Inoshanda: € 179,99
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Noticias » Jabra inogadziridza chigadzirwa chayo nemhando nhatu dzeElite dzakateedzana